Nandriaka ny ra tao amin’ny fokontany Sahafotaka, Kaominina Vohipeno, distrikan’i Fenoarivo-Atsinanana, Faritra Analanjirofo, ny alin’ny akakamisy 18 jona hifoha ny zoma 19 jona lasa teo. 22 juin 2020
Raikitra noho izany ny antso vonjy. Nifanenjehan’ny fokonolona ilay nahavanon-doza ka sarona soa aman-tsara. Tsy namelan’ny fokonolona anefa raha tsy tapitra ny ainy. Raha ny angom-baovao, dia mbola tsy fantatra mazava hatreto ny anton’ny tena nahatonga ilay lehilahy namono nahafaty an’i Théophile. Fantatra kosa fa tsy dia salama saina anefa ilay namono azy. Faty roa araka izany no nitsitra tao Vohipeno.
Niantsoana zandary avy tao Fenoarivo-Atsinanana tampon-tanàna ny raharaha. Zandary miisa telo no tonga tany an-toerana. Ireto zandary ireto izay nolazain’ny fianakavian’i Théophile fa nangata-bola 4 tapitrisa Ariary raha tsy izany dia nambaran’izy ireo fa ho sarotra ny raharaha.